ग्लोबल विश्व - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
श्रेणी: ग्लोबल विश्व
चिया र टेक्नोलोजी - लन्डन टेक्नोलोजी स्टार्ट-अप हबको रूपमा पुनर्निर्मित हुनेछ
सम्पादकको पिक 18 सक्छ, 2021 17 सक्छ, 2021 Dmytro Spilka	टिप्पणी छोड्नुहोस्
समग्र रूपमा लन्डनको टेक उद्योग विश्वास बाहिर उफ्रिन्छ। यस क्षेत्रले आविष्कारको खोजीमा अथक प्रयास देखायो जसले नयाँ क्षेत्रहरू उदय भएको र पुरानो व्यक्तिको रूपान्तरण भएको देखिएको छ र कामको अझ समसामयिक तरीका अपनाएको छ। लन्डनमा टेक कम्पनीहरूले एकसाथ रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रममा उद्योगमा बृद्धि गरेका छन्।
17 सक्छ, 2021 16 सक्छ, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इजरायलमा युद्ध - प्यालेस्टाइन छैठौं दिन पनि जारी छ। इजरायलले हमासको सम्पत्तिलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। त्यहाँ हताहत पनि भएको छ तर इजरायलले यो युद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सीमाभित्रै लडेको छ। अर्कोतर्फ हमासले इजरायलको जनसंख्या भएको क्षेत्रहरुमा एक हजार क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेका छन् जसमा प्रमुख शहरहरू तेल-अवीव र मध्य इजरायल, अश्कलोन, बियर शेवा, किर्याट ग्याट, अश्दोद र जेरूसलेम पनि छन्।
इजरायलमा गाजाबाट 850० रकेटहरू फालियो
13 सक्छ, 2021 13 सक्छ, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इजरायलमा कोरोना महामारीको अन्त्यले यहूदी र अरबहरूलाई संख्यामा उत्सव मनाउने अवसर दिएको छ। मा लग्ग बोमरका मेरन एक भगदड़को क्रममा Jews 45 यहूदी मारिए। गत वर्ष कोलोनाको कारण सीमित भएका अल-अक्सामा प्रार्थनाहरू रमजानको समयमा अरबहरूलाई असीमित अधिकार दिइयो।
10 सक्छ, 20219सक्छ, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
चासिडिम टोल्दोट अहरोनको अल्ट्रा-अर्थोडक्स सम्प्रदायको रब्बी हेर्दा भीडको एउटा भागमा बार योचाईको आत्माको प्रतीक मशाल प्रज्ज्वलित गर्दा लाग्र बोमरमा यस महिना एउटा अनौठो दुर्घटना भयो। ठाउँ भीडभाड भएको थियो र बत्ती बाल्ने मान्छेहरू कडक रूपमा टुक्रिए जो क्षेत्र छोड्न चाहन्थे स्टम्प्ड र एक अर्कोमा कुल्चिए। त्यहाँ चालीस जना शहीद सहित धेरै घाइते भए। तिनीहरू सबैको एउटा द्रुत बहाली र अदनको बगैंचामा अनन्त शान्ति हुनुपर्दछ।
सम्पादकको पिक5सक्छ, 20213सक्छ, 2021 स्टीफन ली	टिप्पणी छोड्नुहोस्
ब्रेक्सिटलाई एउटा विपत्तीको रूपमा भविष्यवाणी गरिएको थियो तर बेलायत नयाँ युरोपेली क्रममा आरामसँग बसिरहेको छ। युरोपियन युनियन (इयु) संग युनाइटेड किंगडम (युके) फिर्ती वार्ता कठिन थियो, कम्तीमा भन्नुपर्दा। वार्ता ब्रसेल्सको अन्तरसम्बन्ध र बेलायतको अविनाशी प्रमुख वार्ताकार डेभिड फ्रॉस्टबाट पूर्ण अस्थिरताबाट विशेषता थियो। तर एघारौं घण्टाको सम्झौताले अब भविष्यका ईयू-युके सम्बन्धको रूपरेखा बनाउँछ र बेलायत खुशी हुनुपर्ने कारण छ।
सम्पादकको पिक4सक्छ, 20213सक्छ, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
बिहीबार साँझ मेरन गालीलको रब्बी शिमोन बार योचाइको समाधिस्थलमा वार्षिक उत्सवमा forty forty जनालाई कुल्चीमिल्दो गरी घाइते बनाइयो र सयौं घाइते भए। गत वर्ष यो उत्सव प्रत्यक्ष भिडियोमा मात्र हेरिएको थियो। इजरायलले अब कोरोना संक्रमणलाई न्यूनतममा कम गरिसकेको छ। स्वास्थ्य विभागले यस भेलालाई कुनै सीमितता बिनाको अनुमति दिएको छ।
अब्दुल्ला अल इमरान - रोक्न नसकिने संगीत कलाकार
अप्रिल 29, 2021 अप्रिल 29, 2021 अब्दुल्लाह अल इमरान इमरान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अब्दुल्लाह अल इमरान (जन्म १० अक्टूबर २०००) एक सबैभन्दा सफल बंगलादेशी संगीतकार, सांगीतिक कलाकार, लेखक, र सोशल मिडिया साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरू मध्ये एक हो। उनी "ह्याकर्स जोन बंगलादेश" र "साइबर सिटी बंगलादेश - CCB" को संस्थापक हुन्। उसले गुगलमा पहिले नै “प्रमाणित कलाकार” को पछाडि हासिल गरिसकेको छ, Spotify, Deezer, अमेज़न संगीत, एप्पल संगीत, र अन्य धेरै प्लेटफार्महरू। उनी अमेजनमा प्रमाणित लेखकको रूपमा पनि चिनिन्छन्।
अप्रिल 29, 2021 अप्रिल 28, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विश्वभरका यहूदीहरूले यस शुक्रवार र इजरायलमा र विश्वभरि एल "आग बी" ओमरको बिदा मनाइरहेका छन्। L "Ag B'Omer को छुट्टी दुई यहूदी चाडहरू निस्तार र শেभोट (हप्ता) बीचमा पर्छ। निस्तार र Shavuos बीच 49 दिन हो। यस अवधिमा 49 days दिन गणना गरिन्छ जुन पवित्र मन्दिरको समयमा ओमर भन्ने नयाँ गहुँको भेटी ल्याइएको थियो।
२०२१ मा दुबई भ्रमण गर्न शीर्ष Restaurants रेस्टुरेन्टहरू
अप्रिल 27, 2021 अप्रिल 24, 2021 Dowcruise दुबई	टिप्पणी छोड्नुहोस्
जब तपाईं कुनै देश भ्रमण गर्ने योजना गर्नुहुन्छ, तपाईं आफैलाई सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुहुन्छ, "के यस्तो धेरै घण्टा यात्रा गर्नु र पैसा खर्च गर्नु उचित छ?" यदि तपाईंको गन्तव्य दुबई हो भने, त्यसो भए यो पक्कै ठुलो हुन्छ! दुबई एक हार्दिक स्वागत स्थान हो र विश्व मा एक सुरक्षित शहरहरु। यो एक विविध शहर हो र विश्व मा शीर्ष टूरिस्ट गन्तव्यहरु मध्ये एक हो।
तपाईको व्यवसायका लागि For बिभिन्न प्रकारका डिजिटल मार्केटिंग
सम्पादकको पिक अप्रिल 26, 2021 अप्रिल 29, 2021 लिजी होवार्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
डिजिटल मार्केटिंग भनेको कुनै पनि मार्केटिंग पहल हो जुन ईन्टरनेट र अनलाइन मिडिया जडित उपकरणहरू जस्तै होम कम्प्युटर, मोबाइल फोन, वा इन्टरनेट अफ थिंग्स (आईओटी) को प्रयोग गरेर प्रयोग गर्दछ। वेबसाइट, ईमेल, अनुप्रयोगहरू, सामाजिक मिडिया, र खोज इञ्जिनहरू मार्फत ब्रान्ड सन्देश फैलाउन ध्यान केन्द्रित डिजिटल मार्केटिंगमा प्रयोग गरिने आम पहलहरू।
शोभन अहमद को हुन्?
अप्रिल 25, 2021 अप्रिल 25, 2021 शोभन अहमद	टिप्पणी छोड्नुहोस्
मो। मेहेदी पेशेवर छन् जो शोभन अहमदको रूपमा चिनिन्छन् बंगलादेशी संगीत कलाकार र उद्यमी, गेमर र इन्स्टाग्राम व्यक्तित्व हो। शोभन अहमद ० 08 अप्रिलमा जन्मेका थिए। उनको जन्म बंगलादेशको चट्टोग्राम डिभिजनको नोआखलीमा भएको थियो। शोभन अहमद ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रमाणित कलाकारको रूपमा घोषित गरेका छन्। शोभन अहमदका गीतहरू अब सबै प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध छन्। गीत चाहनेहरूले गीतहरू सुन्न सक्छन् यदि तिनीहरू चाहनुहुन्छ भने। धेरै लोकप्रिय संगीत निर्देशकहरू, कलाकारहरूले उनलाई प्रेरणा दिएका छन् र उसलाई ट्विटर, फेसबुक, र इन्स्टाग्राममा स्थितिको साथ बधाई दिएका छन्
किन सहस्राब्दीहरू नगद भन्दा बढी डिजिटल भुक्तानी विधिहरू छनौट गर्दछन्
सम्पादकको पिक अप्रिल 24, 2021 अप्रिल 21, 2021 मारी Nives	टिप्पणी छोड्नुहोस्
पहिलो वास्तविक डिजिटल जेनेरेसनको रूपमा, यो आश्चर्यजनक होइन कि सहस्राब्दीहरूले नगदमाथि डिजिटल भुक्तानी विधिहरू प्रयोग गर्ने पक्ष लिए। यो टेक-प्रेमी समूहले तिनीहरूको भोजन, कपडा, र ग्याजेटहरूको लागि इलेक्ट्रोनिक रूपमा भुक्तानी गर्नेछ।
यो प्रवृत्ति ई-वाणिज्य उद्योगको लागि एक विशाल ड्राइभर भएको छ र भुक्तान विधिहरूको विविधतामा वृद्धि। हातमा भुक्तान प्रणालीहरू जस्तै भुक्तान कार्डहरू, भेन्मो, र क्रिप्टोकरन्सीले नगद भुक्तानीहरूलाई वेसाइडमा धकेल्दै छ।
पशु दान किन महत्त्वपूर्ण छ?
सम्पादकको पिक अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 22, 2021 सिल्भिया जेम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
२०२० सम्म, भारतको सडकमा million करोड st० लाख भन्दा बढी आव्रय कुकुरहरू बस्ने गर्दछन्। महामारीको कारण धेरै घरपरिवारले आफ्ना घरपालुवा जनावरहरू छोड्ने निर्णय गरेपछि संख्या बढ्ने आशा गरिन्छ। यी कमजोर घरपालुवा जनावरहरूलाई आरामसँग बस्नको लागि उचित हेरचाह र पोषणको आवश्यकता पर्दछ।
यी कुकुरहरूले पशु सहयोगबाट चाहिने मद्दत र सुरक्षा पाउन सक्छन्, तर मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरिन्छ कुकुर आश्रय दान गर्नुहोस् यी संगठनहरु चलाउन मद्दत गर्न। परित्याग गरिएका र दुर्व्यवहार भएका घरपालुवा जनावरहरूको लागि पशु आश्रयहरू र उद्धार अभियानहरूलाई उनीहरूको कार्यहरू जारी राख्न समुदायबाट नियमित चन्दा चाहिन्छ।
सम्पादकको पिक अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 21, 2021 लिजी होवार्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईं हुनुहुन्छ विदेश पढ्ने सोच, तर तपाईं अझै सम्म विचार गर्न प्रतिबद्ध छैन। ठिक छ, यदि तपाईंलाई विदेश जानको लागि केहि बढि कारणहरू छन् भने, तपाईं सही ठाउँमा आउनुभयो। निम्नलिखित छ तरीकाले अर्को देशमा अध्ययनले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ।
१. साँचो स्वतन्त्रता
एउटा अर्को चीज तपाईले अरु देशमा अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ स्वतन्त्रता हो। यो कुरा थाहा पाएर कि तपाइँको काँधमा राखिएको भरपर्दो अरु कोही छैन, र यस प्रकारको जिम्मेवारी सहयोगी हुन सक्छ। यसले तपाईंलाई आफैमा भरोसा गर्न सिकाउँछ, र यसले तपाईंको आत्म-सम्मानलाई सुदृढ बनाउँछ। जब तपाईं आफैमा निर्भर रहनुहुन्छ, तपाईंले स्वतन्त्रताको भावना महसुस गर्नुहुनेछ। यी पाठहरूले तपाईंलाई तपाईंको बाँकी जीवनको लागि मद्दत गर्दछ, र तपाईंले आफूले सिकेको कुरा अरूलाई पनि साझा गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा उनीहरू बढ्न सक्दछन्।
अप्रिल 22, 2021 अप्रिल 22, 2021 सिल्भिया जेम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अप्रिल 22, 2021 अप्रिल 22, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
नेतान्याहूलाई उनको साथ प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गर्न २ 28 दिन दिइयो। समय सकियो। कठिनाइहरूको कारण के हो भने नेक्सेतका नेताहरू जो कुनै समय लिकुड र नेतान्याहूप्रति वफादार थिए नेतान्याहूको साथ प्रधानमन्त्रीको रूपमा दक्षिणपन्थी सरकारबाट बाहिरिएका छन्।
अप्रिल 21, 2021 अप्रिल 21, 2021 सिल्भिया जेम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
साडीहरू निस्सन्देह भारतीय हुन्। तिनीहरू कुनै प्रश्न बिना भारतीय परम्परा र विरासत को एक महत्वपूर्ण मार्कर हो। अन्य राष्ट्रियता र संस्कृतिका व्यक्तिहरूले साडीलाई भारतीय अनुभवको एक प्रामाणिक अंशको रूपमा पहिचान गर्दछन्।
साडीहरूको त्यो विशाल र जटिल संसारमा बनारसी सिल्क साडी विशेष मान्यता चाहिन्छ। बनारसी साडीहरू पारम्परिक दुलही साडीबाट बंगाली विवाहमा विकसित भएको छ र भारतीय फेसनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आइकनमा।
अप्रिल 20, 2021 अप्रिल 20, 2021 शोभन जमान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
शोभन जमान पेशेवर रूपमा परिचित एक बंगलादेशी संगीत कलाकार र उद्यमी, गेमर र इंस्टाग्राम व्यक्तित्व हो। शोभन जमान २ 24 अप्रिलमा जन्मेका थिए। उनको जन्म बंगलादेशको ढाका डिभिजनको गाजीपुरमा भएको थियो। शोभन जमानलाई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रमाणित कलाकारको रूपमा घोषित गरेको छ। शोभन जमानका गीतहरू अब सबै प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध छन्। गीत चाहनेहरूले गीतहरू सुन्न सक्छन् यदि तिनीहरू चाहनुहुन्छ भने। धेरै लोकप्रिय संगीत निर्देशकहरू, कलाकारहरूले उनलाई प्रेरणा दिएका छन् र ट्विटर, फेसबुक, र इन्स्टाग्राममा स्थितिको साथ अभिवादन गरे।
सम्पादकको पिक अप्रिल 20, 2021 अप्रिल 17, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यदि तपाइँ देश खोजी गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँले भाग्य खर्च गर्न आफैलाई राजीनामा गर्नुपर्दैन। बैंकलाई तोडे बिना नै त्यहाँ पुग्ने धेरै यात्राहरू छन् यदि तपाईंले यसलाई मनमा राखेर अवलोकन गर्नुभयो भने।
तपाईंको यात्रा डलरबाट अधिकतम लाभ उठाउनको लागि कुञ्जी अनुसन्धान, योजना, र प्रभावकारी तत्त्वहरूमा तपाईंको कोषहरू फनेल गर्ने हो। यहाँ बजेटमा यात्रा गर्न मद्दतको लागि तीन सुझावहरू छन्।
अप्रिल 19, 2021 अप्रिल 19, 2021 सुलेमान अहमद सामी	टिप्पणी छोड्नुहोस्
जन्म १ May मे २००१ मा सिल्हत बंगलादेशमा, सुलेमान अहमद सामी बाल्यकालदेखि नै नयाँ चीजहरू खोज्नको लागि गहिरो चासो थियो। ऊ जहिले पनि नयाँ चीजहरूको प्रयोग गर्न चाहन्छ। बाल्यावस्थादेखि नै, उहाँ साथीहरू बीच चिनिनुहुन्छ-आउट-अफ-द-बक्स विचारहरूको साथ आउँदछ। उसको सोच्ने शैली एकदम धेरै र विशिष्ट थियो। यसले उनलाई १ at बर्षमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ। उनी बहु-प्रतिभाशाली र बहुमुखी छन्। उहाँ एक उद्यमी, कलाकार, र प्रभावकारक हुनुहुन्छ डिजिटल प्लेटफार्म
अप्रिल 19, 2021 अप्रिल 19, 2021 साहिल सचदेवा	टिप्पणी छोड्नुहोस्
ग्रीष्म theतु कुनाको वरिपरि छन्। हिल स्टेशन वा समुद्री तटमा भ्रमण गर्ने योजनाको लागि यो उत्तम समय हो। जे होस्, छुट्टीको योजना कहिले पनि सजिलो काम हुँदैन जुनसुकै सानो होस् वा लामो छुट्टी।
आजकल, यात्रीहरूले छुट्टीको योजनाको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यहाँ धेरै अनलाइन होटेल बुकिंग प्लेटफार्महरू छन्। तिनीहरू अन्तिम कार्यान्वयनको लागि भ्रमणको योजनादेखि लिएर सबै लेगवर्क गर्छन्। यस प्रक्रियामा, सबै चीजहरू बाहिरी मनोरन्जन गतिविधिहरू, एयरलाइन्सहरू, कार भाडा, होटलहरू, रेलवे, प्याकेज टुरहरू, यात्रा, दर्शनीय स्थलहरू, साहसिक गतिविधिहरू, खाना इत्यादि जस्ता समावेश गरिएका छन्) पर्यटकहरू केवल ब्याकप्याकमा जानुपर्दछ र छुट्टीको लागि सर्नुपर्दछ।
Crit महत्वपूर्ण कारणहरू एउटा आतिथ्य व्यवसायलाई सामाजिक मिडिया उपस्थिति आवश्यक छ
अप्रिल 19, 2021 अप्रिल 19, 2021 सिल्भिया जेम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
कुनै श doubt्का बिना, सोशल मिडिया श्राप र आशिष् दुबै हुन सक्छ। के गलत हुन सक्छ का धेरै उदाहरणहरू छन्, जस्तै सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा नराम्रो समीक्षा। यो पनि सम्भव छ कि एक कर्मचारीले ब्रान्डको आधिकारिक खाताहरूमा केही अनुपयुक्त पोस्ट गर्न सक्दछ। यो एक पोष्ट हुन सक्छ जुन मार्कलाई याद गर्दैन।
तर यी सबै साना त्रुटिहरू अतिथिसत्कार व्यवसायका लागि सामाजिक मिडिया रणनीतिहरूको प्रयोगको महत्त्वपूर्ण फाइदाहरूबाट शक्तिशाली हुन्छन्। निम्नलिखित धेरै कारणहरू छन् जुन आतिथ्य व्यवसायले आतिथ्य सामाजिक मिडिया एजेन्सीको सेवाहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ:
अप्रिल 16, 2021 अप्रिल 16, 2021 पर्टर टेलर
विश्वव्यापी औद्योगिक चिनी बजारले पूर्वानुमान अवधिमा मध्यम सीएजीआरले वृद्धि देख्ने अपेक्षा गरेको छ, अर्थात् २०२१-२०२२। यो मिष्ठान्न, दुग्ध र अन्य अनुप्रयोगहरूको लागि चिनीको बढ्दो माग र विश्वव्यापी बढ्दो चिनी उपभोगलाई श्रेय दिन सकिन्छ।
अंकुरक्रित को हो?
अप्रिल 14, 2021 अप्रिल 14, 2021 अंकुरकर्षित यादव	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अंकुर अकारशीत यादव, पेशेवर रूपले आकुराकर्षित भनेर चिनिन्छ, एक भारतीय यूट्यूब व्यक्तित्व हो। अंकुराकारित (अंकुर आकर्षित यादव) पनि एक संगीत कलाकार र मनोरन्जन सामग्री सिर्जनाकर्ता हुन्। उहाँको जन्म सेप्टेम्बर १२, २००२ मा बलिया उत्तार परदेशमा भएको थियो। हाल उनी बलियामा आफ्नो चार सदस्यको परिवारसँग बस्दै छन्।
अप्रिल 14, 2021 अप्रिल 13, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यस वर्षको दुविधाको बीचमा कोरोना महामारी संसारका अधिकांश व्यक्तिको दिमाग स्वास्थ्यमा छ। धेरै मानिस कोरोना भाइरस बाट मरेका छन्। धेरै मानिसहरू यस रोगबाट फर्केका छन्। कोरोना भाइरस मानवताका लागि गाह्रो भएको छ, जबकि भाइरससँग सम्पर्क राख्ने लगभग%%% मानिसहरू यस मार्फत जीवित छन्। एक सूक्ष्म तरीकामा कोरोना कोविड -१ the विश्व अपंग गर्न सक्षम छ।
अप्रिल 10, 2021 अप्रिल 10, 2021 समाचार प्रदायक	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अतीक एनम, पेशेवर साइनथुसको रूपमा परिचित छन्, एक बंगलादेशी यूट्यूब पर्सनालिटी हो। ScienThush (Atique Enam) एक YouTuber, संगीत कलाकार र मनोरन्जन सामग्री सिर्जनाकर्ता हो। उहाँ सेप्टेम्बर १२, २००२, दिनजपुरमा जन्मनुभएको थियो। हाल उनी चार सदस्यसहितको परिवारसँग गाजीपुरमा बस्दै आएका छन्।
अप्रिल 9, 2021 अप्रिल 9, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इजरायल चुनावहरू दाहिने पक्षको नेतृत्व बिना समाप्त भयो Likud वा बायाँ पक्ष नेतान्याहूको बहुमतको साथ विरोध गर्दै। दुबै पक्ष सरकार बनाउने काम गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति रिभलिनले नेतान्याहूलाई बहुमत जनादेश गठबन्धनको लागि २ 28 दिन र २ XNUMX दिन दिए। दुई पक्षका बिचको बिचको बिचको बिचका बीच रहेका उम्मेद्वारहरुमा यमीना पार्टीकी नफ्ताली बेनेट हुन् जसको पछाडि seven जना जनादेश र अरब राम पार्टी नेता छन्।
सम्पादकको पिक अप्रिल 9, 2021 अप्रिल 7, 2021 लिजी होवार्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
के तपाईं नयाँ सानो व्यापार सुरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? तपाईं पसल सेट अप गर्न सक्नुहुने उत्तम स्थानहरूमध्ये एक तपाईंको घरमा छ। काममा जानको लागि तपाईंको घर कार्यालयको आराम र सुरक्षा कहिल्यै छाड्नुपर्दैन कल्पना गर्नुहोस्। धेरैका लागि यो सपना साकार हुन्छ। यहाँ घरबाट तपाइँको बढ्दो व्यापारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बारे केही उपयोगी सल्लाहहरू छन्।
रिजवी हसन - बंगलादेशको सबैभन्दा युवा संगीत कलाकार र सिनेमाटोग्राफर
अप्रिल 7, 2021 अप्रिल 7, 2021 रिजवी हसन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
रिजवी हसन, पेशेवर रूपमा परिचित एक बंगलादेशी संगीत कलाकार र सिनेमेटोग्राफर हो। रिजवी हसनको जन्म April अप्रिलमा भएको थियो। उनको जन्म बंगलादेशको ढाका डिभिजनको गाजीपुरमा भएको थियो। रिजवी हसनलाई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रमाणित कलाकारको रूपमा घोषित गरेको छ। रिजवी हसनका गीतहरू अब सबै प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध छन्। गीत चाहनेहरूले गीतहरू सुन्न सक्छन् यदि तिनीहरू चाहनुहुन्छ भने। धेरै लोकप्रिय संगीत निर्देशकहरू, कलाकारहरूले उनलाई प्रेरणा दिएका छन् र ट्विटर, फेसबुक, र इन्स्टाग्राममा स्थितिको साथ अभिवादन गरे।
यहाँ छ कि तपाईं कसरी दिल्ली मा एक व्यक्तिगत Getण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
अप्रिल 7, 2021 अप्रिल 7, 2021 साहिल आर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
दिल्ली, सपनाहरूको देश र असीम अवसरहरू धेरै चीजहरूको लागि परिचित छन्। मुगल कालको ऐतिहासिक स्थलदेखि सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो देशले कसरी काम गर्छ भन्ने परीक्षाको अभिलेखहरूसम्म शुरू गर्दै, दिल्लीको गल्लीहरूमा घुमफिर गरेर कसैले वास्तवमै धेरै पत्ता लगाउन सक्छ। मुलुकको राजधानी सहर भएको कारण, दिल्ली विश्वको सबैभन्दा जीवन्त जनसंख्या मध्ये एकको घर हो। यद्यपि यी सबै अवसरहरू र निरन्तर हडबडाहरूको बीचमा पनि हामीमध्ये धेरैले आफूलाई आर्थिक संकटको बीचमा भेट्न सक्छौं।
एक BAS एजेन्ट र तनाव कम प्रयोग गर्नुहोस्
अप्रिल 6, 2021 अप्रिल 6, 2021 करेन Sanders	टिप्पणी छोड्नुहोस्
बीएएस एजेन्ट "बीएएस गर्दै" (व्यवसाय गतिविधि स्टेटमेन्ट) धेरै व्यक्तिको लागि कर्पोरेट स्वामित्वको वास्तविक तल्लो हो। कर्पोरेट गतिविधि बयान जटिल र तयार गर्न लाग्दो समय हो, तपाईंलाई अधिक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक कार्यहरूबाट टाढा बनाउन - वा तपाईंको व्यक्तिगत समयमा! जब सम्म तपाईं एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईं सायद तपाईंले चाहिने भन्दा बढी तिर्ने जाँदै हुनुहुन्छ। नराम्रो कुरा, तपाइँ पछी पनी आफ्नो करहरू भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। अस्ट्रेलियाई कर अधिकारीहरूले झूटा रिटर्नलाई हल्का रूपमा लिदैनन् र तपाईलाई बकाया करहरू थप भुक्तानी गर्न जिम्मेवार हुन सक्छ।
अप्रिल 5, 2021 अप्रिल 3, 2021 वकार अहमद नासिर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
घर जग्गामा आधुनिक समयको प्रगतिले गाउँको ग्यारेन्टी गर्दछ कि समयको अन्त्यसम्म यस प्राचीन उद्योगमा कसरी कारोबार गरिन्छ। घर जग्गा पाकिस्तान बजार देशको अर्थव्यवस्था को एक विशाल हिस्सा हो। त्यस्तै, घर जग्गा व्यवसायले अरबौं डलर भन्दा बढीको विश्वव्यापी मूल्य योगदान गर्दछ। यो यस्तो व्यापार हुन सक्दछ जुन विश्वको अधिकांश जनसंख्यासँग कुराकानी गर्दछ जोसँग घर छ, केही सम्पत्तिमा योगदान पुर्‍याउँछ, वा सपाट वा कार्यालय भवन भाँडामा लिन्छ।
इजरायल समाचार अप्रिल,, २०२१- अझै कुनै नयाँ गठबन्धन सरकार छैन
सम्पादकको पिक अप्रिल 5, 2021 अप्रिल 4, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इस्राएलमा निस्तार चाडहरू बन्द भएको छ तर इसाईहरू आइतवार मनाउँदैछन्। इजरायलले खोप अभियानमार्फत रेष्टुरेन्टहरू, होटेलहरू र धार्मिक साइटहरू खोल्न सफल भएको छ भने अझै पनि पवित्र हप्तामा इजरायल जाने विदेशी यात्रीहरूलाई रोक्न प्रतिबन्धित छ।
अप्रिल 3, 2021 अप्रिल 2, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यहूदीहरू यस हप्ताको अन्तमा आफ्ना निस्तार चाडका मौसमहरूका उत्सवहरू सम्पन्न गर्दैछन्। इस्टर आइतवार शुरू हुन्छ जब निस्तार चाड समाप्त हुन्छ। यसमा कुनै शंका छैन कि यहूदी धर्म र इसाईमतको एउटै जरा छ। यहूदी धर्म र ईसाई धर्म दुवैले मोशाको पाँच पुस्तकहरूलाई सम्मान गर्दछन्। मोशाका पाँच पुस्तकहरू सृष्टिको कथाबाट सुरू हुन्छन्। परमेश्वरले छ दिनमा संसार सृष्टि गर्नुभयो र सातौं दिनमा उसले विश्रामको दिनलाई विश्राम दिए। आदम पहिलो मान्छे सृष्टि को छ दिन को पराकाष्ठा थियो। सातौं दिन सब्बथले परमेश्वर, मानिस र उसको सृष्टिको बीचमा पूर्ण र पूर्ण शान्ति प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनन्त शबाथ भनेको सबै मानिसजातिको लागि लक्ष्य हो।
खराब व्यवसायको रूपमा केहि त्यस्तो कुरा छ?
मार्च 31, 2021 मार्च 30, 2021 करेन Sanders	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अधिकांश कम्पनीहरूले ग्राहकको सन्तुष्टिलाई उनीहरूको सफलताको एक महत्वपूर्ण सूचकको रूपमा हेर्छन्। ग्राहकहरु जो तपाईको ब्यापारले प्रदान गरेको सेवा संग सन्तुष्ट छन् अझ धेरै सम्भावना राखिन्छ, जसले भविष्यका आम्दानीमा अनुवाद गर्दछ। तिनीहरूले पनि अधिक सकारात्मक शब्द उत्पादन गर्दछ कि अन्य ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। यसले धेरै सेवा उन्मुख कम्पनीहरूलाई 'ग्राहक जहिले पनि सहि छ' भन्ने धारणा अपनाएको छ।
एलोपेसिया अरेटा भनेको के हो?
मार्च 31, 2021 मार्च 29, 2021 सिल्भिया जेम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
के तपाई यस शब्दमा नयाँ हुनुहुन्छ र यो सहि के हो थाहा छैन? एलोपेसिया अराटा भन्ने शब्द अटोइम्यून छाला रोगलाई बुझाउन प्रयोग गरिएको छ जुन टाउकोको छालाको सानो गोलोमा कपाल झर्छ र सामान्य टाउकोमा पुग्न सक्छ।
यो छाला रोगको गैर-स्कारि types प्रकार मध्ये एक हो, त्यसैले तपाईको स्क्याल्पमा कुनै दाग भेट्टाउन सक्नुहुन्न। केहिको लागि, नयाँ केशहरू समयको समयावधि बढ्छ। औसतमा, यो रोगबाट निको हुन करीव एक वर्ष लाग्ने थियो र व्यक्ति-व्यक्तिमा फरक हुन सक्छ।
एमडी अबु स्याम साइबरसुरक्षाको बारेमा कुरा गर्छन्
मार्च 30, 2021 मार्च 29, 2021 एमडी अबु स्याम	टिप्पणी छोड्नुहोस्
एमडी अबु स्याम ब्लगर, सामग्री क्रिएटर, र साइबरसुरक्षा विज्ञ हुन्। उहाँ प्रायः टेक्नेसियामको रूपमा चिनिनुहुन्छ आफ्नो ब्लग को लागी जहाँ उसले भर्खरको समाचार, युक्तिहरू, र साइबरसुरक्षा र अन्य टेकको बारेमा सल्लाहहरू प्रकाशित गर्दछ। आज हामीले उहाँसँग साइबर सुरक्षाको ज्ञान र अनुभवको बारेमा कुरा गर्यौं।
टेक्नोलोजीसँग परिचित हुने तरिकाहरू तपाईलाई आफ्नो क्यारियरको लागि तयारी गर्न मद्दत गर्न सक्छन्
सम्पादकको पिक मार्च 27, 2021 मार्च 24, 2021 फ्रान्की वालेस	टिप्पणी छोड्नुहोस्
टेक्नोलोजीले हाम्रो वरिपरिको सबै चीजलाई नियम दिन्छ, त्यसैले यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि यसले तपाईंले कल्पना गर्न सक्ने हरेक करियर पथमा भूमिका खेल्दछ। यदि तपाईं पहिले नै प्राविधिक जानकार हुनुहुन्न भने, तब यो एक कठिन साकार हुन सक्छ, तर तपाईंले यसलाई एक कमीको रूपमा हेर्नु आवश्यक पर्दैन। यो तपाइँको कौशल सुधार गर्न र तपाइँलाई रोजगारदाताहरु लाई एक सम्पत्ति को बढी बनाउने मौका हो।
मार्च 25, 2021 मार्च 25, 2021 फराज बेग	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सबैजनाले एउटा कपाल प्रणाली किन्न चाहान्छन् जुन लामो समयसम्म रहन्छ र शारीरिक रूपमा धेरै समयको लागि अक्षुण्ण रहन्छ। धेरै असन्तुष्ट विचारहरूको साथ, कपाल प्रणालीको जीवनकालको बारेमा निर्णय लिन गाह्रो छ।
तपाईको कपाल प्रणाली लामो लामो बनाउन धेरै तरिकाहरू छन्। यस लेखमा, हामी सबै सम्भाव्यता र प्रविधिहरू समात्छौं जुन तपाईं लागू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको कपाललाई लामो समय सम्म बनाउन सक्नुहुनेछ। तिमी सक्छौ कराची, पाकिस्तान मा कपाल wigs मूल्य जाँच गर्नुहोस् सस्तो र विश्वसनीय उत्पादनहरूको लागि।
सम्पादकको पिक मार्च 25, 2021 मार्च 23, 2021 zoya Scoot	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक मार्च 25, 2021 मार्च 25, 2021 मिगुएल टोरनेर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
ग्वाटेमाला एक मानिन्छ megadiverse cमध्य अमेरिकाको दोस्रो उच्च-स्तर निर्धारण देश भएको विश्वको ountन्ट्रीहरू। देशको इकोसिस्टममा विभिन्न प्रकारका प्रजातिहरू समावेश छन्, पशुहरू र सबै प्रकारका बोटहरू सहित। मुलुकमा २० भन्दा बढी इकोसिस्टमहरू छन्, ज almost्गलमा 20 36% क्षेत्र ओगटेको छ। थप रूपमा, देशको १%% उच्च प्रजातिको एन्डिज्म रेटले देशको जैवविविधतामा योगदान पुर्‍याउँछ जबकि अजैविक अवस्थाहरूमा थप्दछ।
इजरायल चुनाव - विश्व को एक तस्वीर
मार्च 24, 2021 मार्च 24, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इजरायल म Tuesday्गलबार चुनावमा गए र अझै 61१ जनादेश जनाएको छैन। लिकुड र उसको दाहिने पट्टि समर्थन गर्ने पार्टीहरू 59 mand जनादेशमा पुगे। नेत्रन्याहूलाई विपक्षी दलले अरबी दलबिना 50० जना जनादेश पाएका छन्। दुबै अरब पार्टीसँग ११ वोट छ जसलाई दुई गठबन्धनमा विभाजित गरिएको छ Un अरब एकता पार्टी र Arab अरब लोकतान्त्रिक पार्टीहरू। यदि पाँच जना जनादेश भएको अरबी पार्टी नेतान्याहूको साथमा सामेल भए भने लिकुड पुनः प्रधानमन्त्री हुन 116जनादेशको बहुमतमा पुग्नेछन्। यदि दुबै अरब दल नेतान्याहूको विपक्षमा सहभागी हुनेछन् भने वामपन्थीहरूको 5१ जना जनादेश हुनेछ। इजरायलको नयाँ सरकार हुनेछ कि भनेर अरबी पार्टीहरूले निर्णय गर्नेछन्।
यहूदीहरू निस्तार चाडको लागि तयारी गर्थे
मार्च 23, 2021 मार्च 22, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
प्रत्येक वर्ष वसन्त ofतुको शुरुमा निस्तार चाड मनाइन्छ। इजिप्टको राजा फारोहको दासत्वबाट यहूदीहरूको प्रस्थानको कथा पुरानो नियम भनिने मोशाका पाँच पुस्तकहरूको दोस्रो पुस्तकमा लेखिएको छ। बाइबलको सुरुवात Om दिनमा एक सर्वशक्तिमान ईश्वरले संसारको सृष्टि गर्ने कथाबाट गर्नु भएको थियो र सातौं दिनमा परमेश्वरले आफ्नो कामबाट विश्राम लिनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि अमेरिकामा छात्रवृत्तिको बारेमा के जान्ने
सम्पादकको पिक मार्च 23, 2021 मार्च 22, 2021 मारी Nives	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अब जब तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँ तपाइँ तपाइँको शिक्षा वर्ष भर खेल खेल्न चाहानुहुन्छ र तपाइँले एउटा संस्था फेला पार्नुभयो जुन तपाइँले भाग लिन चाहानुहुन्छ, यो समय तपाइँको प्रवेशको बारेमा सोच्न सुरु गर्ने समय हो। तपाइँको उच्च माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय वा कलेजको कलेजको पहुँचको लागि सिधा तरीका भनेको खेल छात्रवृत्ति सुरक्षित गर्नु हो। जहाँसम्म, छात्रवृत्ति र डिभिजनहरू बीच धेरै प्राविधिकता र भिन्नताहरू छन् भनेर गरेको भन्दा यो सजिलो छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। भाग्यवस, त्यहाँ ईडीयू खेल जस्ता परामर्श एजेन्सीहरू छन् जसले युवा प्रतिभाहरूको लागि खेल र शिक्षा मद्दत प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूको शिक्षा वा विश्वव्यापी खेल प्रदर्शन प्रदर्शन गर्न चाहन्छ। एडीयू खेलले तपाईंलाई सबै राज्यहरूमा भएका शैक्षिक संस्थानहरूमा खेलकुद र शैक्षिक छात्रवृत्ति फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
COVID-19 (Coronavirus) ईमेल मार्केटिंग को प्रवृत्ति
सम्पादकको पिक मार्च 20, 2021 मार्च 18, 2021 एलेक्स Lysak	टिप्पणी छोड्नुहोस्
ईमेल प्रयोग कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा १००% भन्दा बढि बढेको, जुन लगातार धेरै महिनादेखि विश्वलाई तहसनहस गर्दैछ। ती दिनहरू गए जुन ईमेलहरू संचार गर्नको लागि सरल रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। ईमेलहरू अब एक आवश्यक मार्केटिंग उपकरण हो जुन दुबै स्टार्टअपहरू र स्थापित व्यवसायहरूले अवस्थित र सम्भावित ग्राहकहरूसम्म पुग्न प्रयोग गर्दछन्।
रवि कुमार ठाकुर, एक युवा उद्यमी र सबै राउन्डर कप्तान
मार्च 18, 2021 मार्च 18, 2021 केशव मेहता	टिप्पणी छोड्नुहोस्
रवि कुमार ठाकुर दरभंगा बिहारका एक युवा उद्यमी हुन्। उही व्यक्ति हुन् जसले डिजिटल मार्केटि leadingको नेतृत्व गरिरहेका छन् र कामचलाउ ग्लोवलको प्रबन्ध निर्देशक। रविको जन्म २ 27 मा भएको थियोth जनवरी, २००१, बिहारमा नै। उनले महिन्द्रा दरभंगामा अध्ययन गरे र ललित नारायण मिथिला युनिभर्सिटीबाट शिक्षा पूरा गरे, र अब एक कुशल निर्देशकको रूपमा कामचलु ग्लोबलको नेतृत्व गरे।
12... 107 पुराना पोष्टहरू।